warkii.com » Shanta Ciyaartoy Ee Ugu Qiimaha Badan Horyaalka Talyaaniga Ee Serie A Oo La Shaaciyey & Cristiano Ronaldo Oo Ka Maqan
Shanta Ciyaartoy Ee Ugu Qiimaha Badan Horyaalka Talyaaniga Ee Serie A Oo La Shaaciyey & Cristiano Ronaldo Oo Ka Maqan
Suuqa iibka ciyaartoyga ayaa si ramsi ah u furmi doona July 27, waxaanay xilligaas laga bilaabo kooxuhu ka shaqayn doonaan inay suuqa u galaan ciyaartooyo cusub oo ay isku xoojinayaan, waxaana si aad ah farta loogu fiiqayaa dhaqdhaqaaqa ay samayn doonaan kooxaha horyaalka Premier League.
Laakiin waddanka Talyaaniga ayay isagana kooxo ay hormood u yihiin Inter Milan iyo Juventus diyaar u yihiin inay is-dhisaan si fasal ciyaareedka dambe ay ugu hirdamaan Champions League, halka horyaalka Serie A uu noqon doono mid ka beddelan sida uu hadda yahay, maadaama ay kooxo dhawr ah sannadkan koobka kula xafiiltameen Old Lady.
Wargeyska MARCA ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa shaaciyey shanta ciyaartoy ee ugu qiimaha badan ee ku sugan waddanka Talyaaniga waqtigan, waxaanu kasoo dheegtay shabakadda qiimaynta Transfermarkt.
Ciyaartoydan ayuu ka mid noqday weeraryahanka ay u waalanayso Barcelona ee Lautaro Martinez oo sidoo kale ay doonayso Manchester City si uu ugu beddelo Sergio Aguero oo heshiiskiisu dhamaad ku dhow yahay, isla markaana ay da’diisu sii weynaanayso.
Laacibiintan shanta ah ee ugu qiimaha badan, waxa aan ku jirin xiddiga reer Portugal ee Christiano Ronaldo oo xalay dhigay laba rikoodh kaddib laba gool oo uu ka dhaliyey Lazio.
Cristiano Ronaldo ayaa xili ciyaareedkan shabaqa taabsiiyey 30 gool oo horyaalka Serie A ah, waxaanu noqday ciyaartoygii shanaad ee rikoodh noocaas ah sameeya. Waxa kale oo uu dhaliyey goolkiisii 50aad iyo 51aad muddo laba xili ciyaareed gudaheed ah, taas oo iyaduna rikoodh ah.
Laacibka reer Portugal oo ay da’diisu tahay 35 jir, waxa uu liiska ciyaartoyda ugu qiimaha badan Serie A kaga jiraa kaalinta toddobaad, waxaanu kasii dambeeyaa Sergej Milinkovic-Savic oo lixaad fadhiya.
Halkan kaga bogo shanta ciyaartoy ee ugu qiimaha badan horyaalka Talyaaniga ee Serie A: